Fikarohana momba ny firaisana Mpanao horonantsary sady mpihira sady mpihira Freddie Mercury ho fampisehoana ny tononkira Bengalian sy mpihira Rabindranath Tagore - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Tolo-kevitra avy amin'i: Terry Olesen. PhD
Article by: Terry Olesen, PhD ary Walter Semkiw, MD
Taorian'ny Rheiody Bohemian Veiwing, ny fiainam-piainan'i Freddie Mercury lasa Rabindranath Tagore dia naseho tamina fomba amam-panao
Nisy namana iray sy mpiara-miasa amiko, Terry Olesen avy any Aostralia, no nijery ilay sarimihetsika bohemian Rhapsody, izay mikasika ny tarika rock Queen. Taorian'izay, Terry dia nanana ny fisainana tampoka izany Freddie Mercury, mpihira sady mpitendry mpihira Queen, dia ny "vovoka indray ny taonan'i Tagore." Tamin'izany fotoana izany i Terry dia tsy nahalala firy momba an'i Rabindranath Tagore, afa-tsy hoe poety avy any amin'ny tanin'i Bengal izy.
Ny fanombanana fanampiny dia nanambara fa ny endriky ny tarehin'ny Tagore sy ny Mercury dia tsy miova, mitovy ny talenta ary izany dia toa mifanohitra amin'ny lalànan'ny vovoka.
Nandritra ny fivoriana nanaraka an'i Kevin Ryerson, Ahtun Re, ny torolalan'ny fanahy Ejiptiana nivezivezy nanerana an'i Kevin izay naneho ny fahafaha-manao ny fiainan'ny fiainana taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana marina, dia nanamafy fa i Freddie Mercury no tena vatana vaovao indray ao Rabindranath Tagore.
Ny fiainan'i Rabindranath Tagore sy ny Loka Nobelany ary ny Bard of Bengal
Bengal dia firenena iray any avaratra atsinanan'i India. Rabindranath Tagore dia teraka tao an-tanànan'i Kolkata (fantatra taloha hoe Calcutta) tamin'ny 1861. Poeta, mpitendry mozika ary mpanakanto izy. Nanomboka nanoratra tononkalo i Tagore fony izy 8 taona ary nisy boky tononkalony navoakany rehefa 16 taona izy. Tamin'ny 1913, fony izy 52 taona, dia i Tagore no voalohany tsy eropeana nahazo ny loka Nobel tamin'ny literatiora. Ny zava-bitany dia nanjary nantsoina hoe "The Bard of Bengal."
Ny hiram-pirenena nataon'i Rabindranath Tagore dia taratry ny hiran'i Freddie Mercury
Ho fanampin'izay, Tagore dia mpamoron-kira mamokatra ary nanoratra hira 2000 mahery. Ny roa tamin'ireo hirany dia voafantina ho hiram-pirenena, ny an'i Sri Lanka sy Bangladesh. Tagore dia maty tamin'ny 1941, tao amin'ny tanàna nahaterahany, Kolkata.
Freddie Mercury dia teraka tamin'ny 1946, 5 taona taorian'ny nahafatesan'i Tagore. Na dia fantatra ho mpihira anglisy mpihira malaza aza i Mercury, dia teraka tany Afrika izy tamin'ny ray aman-drenin'ny razamben'ny Persiana (Iraniana) izay teraka tany India.
Hatramin'ny nahaterahany dia nomena an'i Farrokh Bulsara i Freddie Mercury. Nihalehibe tany Afrika izy ary avy eo, rehefa niverina tany amin'ny fireneny ny ray aman-dreniny, dia nipetraka tany India izy.
Rehefa nifanila tamin'ny faran'ny zandriny i Farrokh dia nifindra tany Angletera ny fianakaviany. Raha izy no 24 taona, dia namorona ny tarika rock izy vadin'ny mpanjaka, miaraka amin'ny guitarist Brian May sy ny mpiloka Roger Taylor. Farrokh Bulsara, tamin'io fotoana io, dia naka ny anarana hoe Freddie Mercury.
Freddie Mercury nanoratra Anthems Musical, toa an'i Rabindranath Tagore: Bohemian Rhapsody
Freddie Mercury, toa Tagore, dia mpamoron-kira manerantany ary nanoratra ny ankamaroany Queen 's hits. Ary koa, toa an'i Tagore, ny hiran'i Mercury, toy ny Mpandresy isika, manana kalitaon'ny hiram-pirenena. Ny sarimihetsika momba izany Queen, bohemian Rhapsody, dia navoaka tamin'ny novambra 2018 ary nanjary ny sarimihetsika ara-piraisam-peo mozika avo indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Freddie Mercury dia niady saina ary maty tamin'ny SIDA tamin'ny volana novambra 1991. Tagore dia nanambady vehivavy iray ary nanana zanaka maromaro.
Ireo mozika klasika dia niorina kintana rock
Mpihira maro tamin'ny andro taloha, anisan'izany ireo mpilalao sarimihetsika, dia nanjary niorina ho toy ny kintana rock, mampiseho fa ny talentan'ny mozika dia mifanentana amin'ny endriky ny mozika. Mba hamerenana ireo tranga ireo, azafady mankany:
Mozika sy Mpanjakavavin'ny sehatr'asa
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endrik'i Rabindranath Tagore sy Freddie Mercury dia tsy miova.
Ny fiainana taloha talenta: Ny talentan'i Rabindranath Tagore ho mpihira sy mpihira dia miseho amin'ny asan'i Freddie Mercury.
Fiovàn'ny fiaraha-monina sy ny fiaraha-monina: Bengali ny Rabindranath Tagore, raha i Freddie Mercury kosa teraka tany Afrika tamin'ny ray aman-drenin'ny razambe persianina, izay teraka tany India. Freddie dia nifindra tany Angletera tamin'ny mbola kely ary fantany amin'izao tontolo izao ho kintan'ny britanika rock.